Ambohijatovo: taxi-be nivadika teo afovoan’arabe | NewsMada
Ambohijatovo: taxi-be nivadika teo afovoan’arabe
Nivadika teo afovoan’arabe eny Ambohijatovo ny taxi-be iray, ny asabotsy teo. Araka ny fanazavana azo, tapaka hisatra izy io ka tsy nahajanona ary nivadika ny niafarany. Soa ihany fa tsy nisy ny aina nafoy na ratsy aza ny fisehon’ny loza. Maromaro ny naratra vokatry ny loza. Nalefa notsaboina ny naratra ary nanao ny fanadihadiana ny polisy.
Taxi-be iray ihany koa niharan-doza nivadika tany an-tanimbary, tany Antsampandrano. Tsy nisy ny aina nafoy fa betsaka ny naratra. Tsy nisy natahorana ny momba ireo olona tao amin’ilay fiara io. Vokatry ny fandehanana mafy ny nahatonga ny loza. Efa notanan’ny mpitandro filaminana ny mpamily ny fiara.
Niharan-doza ihany koa ny fiara iray nitatitra olona hiatsinanana, tany Marozevo ny asabotsy ihany. Nifandona tamin’ny kamiao ilay fiara mpitatitra. Simba ny lohan’ny fiara ary naratra ny mpamily sy ny teo aloha rehetra. Maromaro ny lozam-piarakodia ny faran’ny herinandro teo. Mahatonga ny loza ny tsy fitandremana, tsy fahatomombanana.